Misy fitaovana maoderina miavaka amin'ny Amazon ho an'ny mpandray anjara ve?
Efa fantatry ny besinimaro fa ny fikarakarana fikarohana sandoka mety dia anisan'ireo singa fototra ao amin'ny Search Engine Optimization (SEO) sy ny foto-kevitra maoderina momba ny varotra Digital sy ny orinasa Ecommerce manontolo, raha ny marina dia tsy miraharaha izay toerana hivarotanao. Misy SEOs manam-pahaizana sasantsasany milaza fa "ny votoaty dia ny mpanjaka. "Ary izany dia mahatsapa ho tsy ny fanatsarana ny karoka fikarohana tany amin'ireo fitaovam-piadiana goavana tahaka an'i Google ihany, fa ho an'ny orinasa misotro ronono sy ny tetikasa antserasera rehetra mifandraika amin'ny varotra antserasera, toy ny Amazon. Ary andeha hojerena izany - tsy tokony ho ny fanontaniana no tena ilàna ny mpivarotra amazonin'i Amazonia ny tenimiafina maotina amin'ny tenimiafina - uhr mit glitzersteinen.
Ary tsy hoe mijanona fotsiny amin'ireo mpanohitra ny nicheo ary manomboka manangana ny lazany sy ny fahefany ho toy ny mpivarotra mahomby mendrika hividy amin'ny. Ny zava-misy dia tsy misy olona afaka ho tafavoaka velona ao anatin'izany fifaninanana ara-barotra tena marina izany, raha tsy ampiorenina amin'ny tenifototra sandoka amin'ny tenimiafina Amazon, manara-maso ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ireo fitaovam-pifidianana mba hampandehanana ny lisitry ny vokatra. Farany - mba handresy ny boaty fividianana ary hijanona eo amin'ireo tavoahangy avo lenta omena amin'ny vidiny.
Noho izany, raha ny fiheverana fa ny fikarohana teny fototra, ary koa ny soso-kevitra saro-takarina lava be, dia tena ilaina tokoa fa tsy karazana lozisialy, eto ny sasany fomba mahazatra amin'ny fisafidianana ny fitaovana mora ampiasaina mora ampiasaina tsara indrindra amin'ny Amazon ho an'ny mpandray anjara. Antenaiko fa hahazo kickstart tsara amin'izy ireo ianao, mazava ho azy fa tsy mandany vola, satria ny iray amin'ireo fitaovana maoderina ampiasain'ny Amazon-nao Amazon dia azo alaina amin'ny fidirana mivantana ao amin'ny Internet, na farafaharatsiny ny dikan-teny fototra azy ireo.
Toa tsy misy mpitaingina, fa ity fitaovana fototra ampiasain'ny liona ity amin'ny SEOs dia mety hanompo eny na dia mpivarotra vaovao aza ao Amazon raha ny teny fanalahidy software izay tena miasa. Ny zavatra dia ity vahaolana fototra ity dia tena lehibe tokoa ho an'ny mpandray anjara. Amin'ny ankapobeny, satria ity fitaovana maimaim-poana amin'ny alàlan'ny karazana fikarohana manerantany ity dia tsara be ny manome anao sary lehibe izay mampiseho ny voka-pikarohana rehetra mety ho azonao sy ny fifandimbiasana lava, ny haavony ankehitriny (raha tsy izany, , ary koa ny habetsahan'ny fikarohana ho an'ny teny fototra ifantohan'ny lasibatra. Ary tsy ilaina ny milaza fa ny angon-drakitra nomen'i Google dia tsy maintsy ho ny iray faran'izay malalaka indrindra sy tena lalina indrindra, miaraka amina tontolon'ny varotra (tahaka ny Amazon, eBay, Walmart, sns.), fa nivory avy amin'ny fikarohana ara-tsosialy rehetra azo jerena ao amin'ny Internet.
Ity misy lisitra fohy amin'ny tombontsoa lehibe nomen'ny Google Word Keyword Planner raha ampiasaina amin'ny sehatry ny fikarohana karoka fikarohana momba ny teny Amazon:
Diniho Ny famokarana ny lisitry ny vokatra dia mamaritra ny teny fototra na fikakarana fohy. Ampidiro fotsiny ny solon'anarana, ny fehezan-teny rehetra, ny sokajy, ny tranonkala, na ny mpamorona - ary vita izany.
Manana sary lehibe momba ny volavolam-pikarakaràna ho an'ny teny fanalahidy mahazatra amin'ny vokatra na tsipika mety ho azon'ireo mpampiasa mivezivezy manerantany.
Ampitomboy ny lisitry ny lohateny lehibe indrindra sy ny adiresy manan-danja amin'ny alàlan'ny fananana hevi-dehibe tena ilaina sy ny soso-kevitra ankapobeny amin'ny teny lava. Ary aza adino fa ny tombantomban 'i Keyword Google dia tena karazana volamena azo hamantarana haingana ireo teny fanalahidy tianao indrindra ao amin'ny faritra izay mikendry ny toerana (i. f. , tanàna, fanjakana ary firenena).
Tsy toy ireo fitaovana maoderina tenimiafina malaza hafa Amazon, ity fitaovana ankapobeny rehetra ity dia natao hanomezana anao ny fomba fitenenana mazava tsara - nipoitra mivantana avy amin'ny mpanohitra ny nicheo , na angonina avy amin'ny olona mahomby indrindra mivarotra any amin'ny Internet. Raha manana fotodrafitrasa maimaim-poana maimaim-poana sy maimaim-poana ianao, Keyword Spy dia vahaolana tena tsara ho an'ny mpivarotra mpividy mba hanombatombana haingana ny volan'ny fikarohanao amin'ny teny fanalahidy rehetra, mifanaraka amin'ny fanolorana karazan'olona mifandraika amin'ny fikarohana mifandraika sy manondro ny tandroka rehetra Combinations (miaraka amin'ny safidy azo atao sokajy LSI) azonao omena.
Io rafitra SEO io ​​dia manana fitaovana manokana ho azy, izay mora mora ho lasa vahaolana hafa lehibe hafa rehefa mifidy ny tsara Amazon keyword software. Anisan'ireo sehatra matanjaka indrindra, ireo endri-panehoana fototra ho an'ny fikarohana lalindalina kokoa dia nahitana fahombiazana tsara: manombana ny tombatombana amin'ny sora-baventy amin'ny teny fanalahidy, fanombanana ny isam-bolana, ny fitantanana PPC, ny fikarohana fifaninanana ary ny fanadihadiana momba ny fifamoivoizana momba ny mpanohitra anao.
Ity lohatenim-panazavana ity dia anarana fampiasana tenifototra tenenina malaza indrindra Amazon. Eny, ny Keyword Tool dia tsy mpitsikera maotera tokana, fa ny seha-pifaneraserana iray manontolo izay manome maimaimpoana maimaim-poana azo alaina ho an'ny mpivarotra amoron-dranomasina Amazon mba hahitanao ireo teny fanalahidy tsara indrindra sy ireo teny lava fohy ho an'ny lisitry ny vokatra. Mariho anefa, fa ny famoahana ireo singa tena mivoatra sy sarotra amin'ity sehatra ity, ireo mpandraharaha matihanina mavitrika kokoa amin'ny fivarotana Amazon dia mila mandoa ny dikan-teny avo lenta antsoina hoe Keyword Tool Pro.
KwFinder no fitaovana maoderina farany ampiasaina amin'ny Amazon, te-hampiseho anao androany. Ity safidy ity dia mety ho azonao tsara raha tonga eo amin'ny famokarana masombolin'ny dikan-teny lava lava sy taila sy ny fikarohana momba ny fikarohana amin'ny fahazoana ny lazan'ny mpividy mivantana hatramin'izao.Manampy koa i KwFinder ho an'i Amazon irery ihany, fa ny sisa amin'ireo sehatra ecommerce malaza indrindra (toy ny eBay, Walmart, Alibaba Store, sns.), ary koa ny sasany, na toerana tsy varotra, toy ny YouTube fampiantranoana video, ny tranonkala faharoa be mpitsidika indrindra maneran-tany. Raha ny marina dia hitako fa tena mahasoa kokoa ny KwFinder, indrindra ho an'ny karazana fampiasana maro toy ny fomba tsotra fanaovana kopia mifantina haingana ny lisitr'ireo lisitra, miaraka amin'ny soso-kevitra hafa izay tsy dia nampiasaina loatra avy amin'ny fanondroana fizarana semantika, fanontaniana ho an'ny teny filamatra ilaina rehetra, ary koa ny fahasarotana sahaza azy.